Kianja filalaovana Metalco → Architecture kely an-drenivohitra • Mpanamboatra • Mpizara
HO ANY ARCHITEKO
Lalao playco metalco
Modern tokotanin-tsekoly mamela ny fialamboly tsy voafetra sy azo antoka eny amin'ny habakabaka tsy ho an'ny ankizy amin'ny sokajin-taona rehetra, fa ho an'ny tanora ihany koa.
Mahafinaritra amin'ny nitaredretra ary ny fitaovana rehetra apetraka amin'ny kianja filalaovana, indrindra rehefa tazonina ao amin'ny orinasan'ny mpiara-miasa, dia fomba tena tsara handanianao fotoana malalaka, ary miaraka amin'izay dia manohana ny fivoaran'ny saina sy ny saina ara-batana an'ny tanora iray.
View katalaogin'ny vokatra an-tserasera >> na misoratra katalaogy >>
Kianja filalaon'ny ankizy afaka mifankahita isika tsy any an-tsekoly sy any amin'ny akanin-jaza ihany, fa koa amin'ny zaridainam-panjakana sy zaridaina an-trano, satria efa fantatra hatramin'ny ela fa ny filalaovana ny mpiara-mianatra eny ivelany dia ahafahan'ny fivelarana ara-tsosialy sy maotera tsara kokoa an'ny zaza, mampivelatra ny fahaizany mamorona sy mamolavola ny fahaizany mamorona.
Hitanisa ity pejy ity Lafin-javaboary, tanàna ary zaridaina
Rehefa mamolavola kianja filalaovana mpanamboatra na izany aza, tsy maintsy hikarakara tsy ny fitaovana manintona sy miloko ihany izy io, fa ny fahamendrehan'ireo fitaovana ihany koa. Izany no antony maha-zava-dehibe ny fisafidianana ny toerana filalaovan'ny ankizy, na valan-javaboary na zaridaina an-trano izany kianja filalaovana voamarina.
Hitanisa ity pejy ity Familiana bisikileta - karazana ary tombony
Garden playgrounds Ny orinasa Metalco dia mamela anao hilalao soa aman-tsara any ivelany noho ireo fitaovana mahaliana sy mandeha mamorona ity kianja filalaovana ity. Ireo dia karazan-swing rehetra natao ho an'ny olona iray na maromaro, tohatra, indraindray carousels, slides ary fitaovana fiakarana rehetra.
Kianja filalaovana zaridaina tokony hiantoka ny fiarovana ny filalaovana amin'ny fitaovana rehetra izay tsy maintsy ampifanarahana amin'ny taona sy ny fahaizan'ny mpampiasa izany.
Ireo fitaovana sy kilalao natokana ho an'ny ankizy faralahy dia kely, maro loko ary ambany toerana mba hanamorana ny fampiasany sy hiantohana ny fiarovana, eny fa na dia ho an'ireo zaza tsy dia mahay loatra aza. Kianja filalaovana zaridaina, izay filalaovan'ny ankizy lehibe kokoa, manome fihetsem-po bebe kokoa ary manome antoka fahafinaretana lehibe amin'ny fitaovana somary sarotra kokoa. Ho an'ireo mpampiasa be dia be, ny haavon'ny fahasahiranana dia efa avo dia avo, hany ka tsy ny tanora hahay handanjalanja fotsiny fa hampivelatra ny tanjaka sy ny faharetana.
Kianja filalaon'ny ankizy voalamina ao an-jaridaina, matetika izy ireo dia manankarena amin'ny mandanjalanja sy trano filalaovana apetraka amin'ny haavo. Ho fanampin'ireo fitaovana filalaovana rehetra dia tokony hotadidinao koa ny momba ny faritra azo antoka izay hisitraka ny fahalavoana rehetra. Rehefa mandamina ny kianja filalaovana dia mendrika ihany koa ny fikolokoloana toerana ahafahanao mametraka seza sy latabatra mba hahafahan'ny ankizy misakafo rehefa milalao na miala sasatra amin'ny alokaloka.
Jereo ohatra ny METALCO tena izy
Fitaovana filalaovana noforonin'i Metalco, mpitarika manerantany trano maritrano kely Mampiavaka azy ireo ny endrika maoderina sy ny endrika ergonomika, ary koa ny loko mahaliana sy ny faharetana ampy, izay manome antoka ny filalaovana tsara sy azo antoka.
Rehefa mamolavola mpamokatra kianja filalaovana ho an'ny ankizy tsy maintsy ilaina ny mandray ny taonan'ny ankizy izay amoronany toerana hilalaovana sy hamoronana toerana ho an'ny ray aman-dreny na mpiambina izay mikarakara ny ankizy mandritra ny lalao.
Mandamina fampiasa kianja filalaovana zaridaina izy io dia mety ahitana fitaovana natao tsy ho an'ny ankizy sy ny tanora ihany, fa ho an'ny olon-dehibe sy ho an'ny be taona koa. Amin'ny toerana toy izany dia afaka mahita zavatra ho an'ny tenany ny mpianakavy tsirairay avy ary tsy vitan'ny hoe miala voly fotsiny, fa mikarakara ny fahasalamany sy ny toe-batany ihany koa, ary izany rehetra izany dia azo atao any ivelany sy miaraka amin'ny olon-tiany.
Fitaovana noforonin'i Metalco, mamorona kianja filalaovana zaridaina, vita amin'ny aliminioma sy plastika miloko. Ny fampifangaroana fitaovana mahaliana sy manavao toy izany dia ahafahanao mamorona endrika firafitra nofinofy natao ho an'ny lalao. Ny kianja filalaovana zaridaina dia mamela ny fianakaviana manontolo hiala voly, satria tsy ny ankizy ihany, fa ny olon-dehibe koa, no maniry handray anjara amin'ny lalao an-kalamanjana.
Tokony hotadidina indray fa ny kianja filalaovana dia tsy maintsy miantoka ny fiarovana ny ankizy milalao eo amboniny, ka mendrika ny hisafidianana kianja filalaovana misy taratasy fanamarinana.
Ny famolavolana ny kianja filalaovana ho an'ny zaridaina dia tsy maintsy atao raiso ny taonan'ny ankizy milalao eo aminy, ny topografia, ny tara-masoandro, ny fahitan'ny ankizy avy amin'ny varavarankely an-trano sy ny faritra azo antoka an'ny fitaovana rehetra eny amin'ny kianja filalaovana. Ankoatry ny fitaovana miorina mafy, ny toerana azo antoka izay mandray ny fianjerana dia zava-dehibe ihany koa.
Modern kianja filalaovana zaridaina dia fampiasam-bola izay tsy mamela ny zaza hanana fahafinaretana lehibe, fa mampitombo ihany koa ny vatany ara-batana, noho izany dia zava-dehibe fa ny kianja filalaovana dia manome antoka azo antoka indrindra ho an'ireo ankizy milalao eo amboniny.
Noho izany, mendrika ny misafidy mpamorona sy mpamokatra fitaovana mety apetraka amin'ny kianja filalaovana, hahazoana antoka fa manaraka ny fenitra momba ny fahasalamana sy ny fiarovana azo ampiharina.
5 / 5 ( 1 fifidianana )
kianja filalaovana inflatablekianja filalaovana hazoohatrinona ny taratasy fanamarinana ho an'ny kianja filalaovanaohatrinona ny kianja filalaovanany fomba fananganana kianja filalaovanany fomba fanamboarana kianja hazony fomba fanaovana kianja filalaovanany fomba fanaovana kianja filalaovana ho an'ny ankizympitarika ny kianja filalaovanazana-tohatra ho an'ny kianja filalaovanakianja filalaovana zaridainatokotanin-tsekolykianja filalaon'ny olon-dehibetoerana ho an'ny ankizykianja filalaovan'ny ankizy Warsawkianja filalaovana zaridainakianja filalaovana hazokianja filalaovana hazo ny fomba fanaovanakianja filalaovana ao Gdańskkianja filalaovana GdyniaKianja filalaovana KatowiceKianja filalaovana Krakowkianja filalaovana zaridainakianja filalaovana amin'ny teny anglisykianja filalaovana poznańmpanamboatra kianja filalaovanafamolavolana kianja filalaovanaKianja filalaovana Szczecinkianja filalaovana an-jaridainakianja filalaovana Warsawkianja filalaovana Wrocławnalevina ny kianja filalaovanaplaygroundstoeram-pilalaovana mpizarakianja filalaovana rano
Amin'izao fotoana izao, ny fanaka an-dalambe dia ahitana koa rakotra hazo. Ireo singa miasa sy aesthetic ireo dia azo atao amin'ny fitaovana isan-karazany. ...
Ireo rafi-dratsy manjavozavo ho an'ny efitrano famafazana mampiasa ny fomba maina fog
Ireo rafitra diso fanamboarana eo amin'ny dity dislamection fog dia maina dia azo ampiasaina amin'ny toerana maro. Amin'izao dia izao ...
Vaovao amin'ny tolotra! Ivontoerana famonoana otrikaretina - fahadiovan'ny tanana amin'ny METALCO
Tranon-tsindrona / tobim-pahadiovan'ny tanana dia zava-baovao amin'ny tolotra ataontsika ho singa amin'ny maritrano kely. Vahaolana iray manamora ny ...
15 Aprily 2020
Ny fanamboarana trano kely dia vita amin'ny singa maritrano marobe izay nampidirina tao amin'ny haben'ny tanàna na teo amin'ny fananana manokana ary ...
31 Martsa 2020
Chambre Architects ny Repoblika Polonina
Marina fa ny asan'ny maritrano dia asa matihanina afaka mitondra fahafaham-po sy tombontsoa betsaka, fa ny fomba manomboka miasa ...
Famatsiam-bolo sampana ho ampahany amin'ny fanarenana ny tanàna dia manampy amin'ny fahadiovana ny toerana ho an'ny daholobe, hanesorana ireo olana mifandray amin'ny ...
NY ZANAKO ARIKA
Namaky sy nanaiky ny fitsipiky ny tranokala aho